Ogaden News Agency (ONA) – Qaraxo Caasimada Belgium ee Brussels Kadhacay & Khasaare Kadhashay.
Qaraxo Caasimada Belgium ee Brussels Kadhacay & Khasaare Kadhashay.
Magaalada Brussels ayaa laba weerar oo qorsheysan lagu qaadey garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels xarunta dalka Biljimka iyo weliba Midowga Yurub, weerarka hore ayaa la aaminsan yahay in ay ka qayb-qaateen saddex nin oo laba kamid ah ay ku geeriyoodeen weerarka kadib markii ay isku qarxiyeen bom ay isku soo rakibeen, ninka saddexcaad ayaa hadda la baadi goobayaa. Kuwa la tuhunsan yahay ayaa garoonka soo galey iyaga oo u eg kuwo safraya oo wata Boorsooyin, waxaana qabatey Kaamarooyinka loo yaqaan CCTV.
Weerarkan waxaa ku geeriyoodey ugu yaraan 11 qof, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka, warbaahinta Biljimka ayaa sheegaysa in 14 qof ay ku geeriyoodeen halka dhaawucu yahay 81 qof. Weerarka waxaa la sheegayaa in lala beegsadey Miiska safkii diyaaradda American Airlines oo markaas baxaysey, ilaa hadda dalalka ay u dhasheen kuwa ladiley lama shaacinin.
Weerarka labaad ayaa ka dhacay xarunta Metro-ga dhulka hoostiisa mara ee Maelbeek, waxaana ku geeriyoodey dad gaadhaya 20 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad ku dhaw 60 qof. Weeraradan ayaa imaanaya maalmo kadib markii hawlgal culus Boolisku kusoo qabteen ninka la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii weerarkii Paris Saalax Cabdisalaam, lama oga in uu yahay aargoosi, iyo in ay fuliyeen koox kaloo cusub.
Ururka Daacish/ISIS ayaa sheegtey weerarkan in ay iyagu fuliyeen,waxaana ay ku sheegeen wargeys afkooda ku hadla, in askartoodu fulisey weeraradii maanta ka dhacay Bruselss.
Hoggaamiyaasha caalamka ayaa canbaareeyey weerarkan, waxaana ay taageero u ballan qaadeen dalka Biljimka. Xuduudaha Midowga Yurub ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaan weli laga cabsi qabaa weeraro kale oo ay fuliyaan ISIS.